Họrọ ikike: Ihe Ntanetị maka Selecthọrọ Ikike CC Kwesịrị Ekwesị | Site na Linux
Iji nke a afọ 2021, na Commtù Creative Commons nke a si Afọ 20, taa anyị ga-enyocha ihe na-atọ ụtọ ma bara uru na ntanetị sitere na ha, akpọrọ "Onye choro Ikike" o Onye Nhọrọ Ikike.
"Onye choro Ikike" Ebumnuche ya bụ ịkwado ma melite nhọrọ kwesịrị ekwesị nke CC ikike maka ihe okike nke ndi nwere mmasi.
Anyị ekwuola okwu n’oge ndị ọzọ ọzọ online akụ nnọọ uru nke Commtù Creative Commons. Ya mere, dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-ahapụ ozugbo n'okpuru, njikọ nke kwuru yiri gara aga post ebe anyi rutere ya nso, akpo ya Chọọ:
"Zọ kachasị mma iji chọta nnukwu ọdịnaya na ikikere Copyleft dị n'aka nke gị Creative Commons nzukọ nyocha engine. Site na ngwá ọrụ a dị egwu, anyị ga-achọpụta ọtụtụ foto na ọdịnaya ọdịyo ndị ọzọ na-enweghị ikike na ọrụ dị iche iche: Google, Flickr, Blip.tv, Jamendo, Wikimedia ma ọ bụ SpinXpress." ¿Etu esi choo ihe ichoro Creative Commons?
1 Onye Nhọrọ Ikike: Web iji họrọ ikike CC kwesịrị ekwesị
1.1 Kedu ihe bụ ikikere Creative Commons?
1.1.2 Commtù Creative Commons
1.2 Gịnị bụ License Chooser na otu o si arụ ọrụ?
1.2.1 Stabledị anụ
1.2.2 Betadị beta
1.3 Ozi ndi ozo banyere Creative Commons
Onye Nhọrọ Ikike: Web iji họrọ ikike CC kwesịrị ekwesị
Kedu ihe bụ ikikere Creative Commons?
Iji ghọta nkenke, kedu ihe ndị a Creative Commons ikikere, nkọwa nke otu nyere site UNESCO nzukọ ụwa. Nke kwuru ihe ndị a:
"Creative Commons (CC) Ikike bụ nkwekorita usoro nke na-enye ikikere iji ihu ọha jiri ikike iji mbipụta nke ikike nwebisiinka chebere. Obere mmachi ikikere na-egosi, ka ukwuu nke ohere iji ma kesaa ọdịnaya. Akwụkwọ ikike CC na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ibudata, detuo, kesaa, tụgharịa, jigharị, gbanwee ma mepee ọdịnaya ha na enweghị ọnụ." Creative Commons ikikere
Commtù Creative Commons
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ akwụkwọ na ntanetị gbasara ha. Na ụzọ kasị mma dị na mbụ na-aghọta na-amụta, bụ ịkpọtụrụ isi iyi gọọmentị nke ihe a nyochara. Ya mere, ezigbo bụ iji nweta Ngalaba "Ikike" site na ukara website nke Commtù Creative Commons nke mere na ọ ga-adị mfe nyocha na-amụ, na akporo nke kwuru CC ikike.
"All ikikere Creative Commons nwere njirimara dị mkpa. Akwụkwọ ikike ọ bụla na-enyere ndị okike aka (anyị na-akpọ ha ndị ikikere ma ọ bụrụ na ha ejiri ngwaọrụ anyị) iji jigide nwebiisinka ha ma na-enye ndị ọzọ ohere idetuo, kesaa ma jiri ụfọdụ ọrụ ha - ma ọ dịkarịa ala n'ụzọ na-abụghị nke azụmahịa. Ihe ikikere Creative Commons niile na-ahụkwa na ndị nyere ikikere nwetara otuto ha kwesiri maka ọrụ ha.
Creative Commons ikikere na-arụ ọrụ gburugburu ụwa ma na-adịgide ma ọ bụrụhaala na iwu nwebisiinka metụtara (n'ihi na ha dabere na ya). Commondị njirimara ndị a na-abụ ihe ndabere nke ndị na-enye ikikere nwere ike ịhọrọ inyekwu ikike mgbe ha na-ekpebi otu ha chọrọ iji rụọ ọrụ ha."
Gịnị bụ License Chooser na otu o si arụ ọrụ?
Dị ka anyị kwurula na mmalite nke mbipụta a, ihe ntanetị a nke Commtù Creative Commons, ihu ọma Aims, na ikwado ma melite nhọta kwesiri nke ikike CC maka ihe okike nke ndi nwere mmasi.
Ma ugbu a nwere Nhọrọ 2 ojiji:
Ọ nwere interface dị mfe na otu oghe ihu, nke gosipụtara nhọrọ dị na nsonaazụ enwetara na nhọrọ ọ bụla.
Ọ nwere interface na ọgụgụ isi dị ka nkuzi ma ọ bụ nduzi, nke usoro ọ bụla na-enye onye ọrụ ohere iru ebumnuche nke inweta ikikere CC kachasị mma.
Ozi ndi ozo banyere Creative Commons
Maka ozi ọzọ na Commtù Creative Commons, ihe ntanetị ya na ikikere ya ị nwere ike inyocha njikọ ndị a bara uru:
Afọ iri abụọ nke Creative Commons
"Creative Commons bụ nzukọ zuru ụwa ọnụ na-enweghị uru na-enyere ike ihe okike na ihe ọmụma aka ma kesaa site na ịnye ngwaọrụ iwu n'efu. Ngwaọrụ iwu anyị na-enyere ndị chọrọ ịgba ume ka ijighachi ọrụ ha site n'inye ha maka ojiji n'okpuru usoro mmesapụ aka na nke tozuru etozu; nye ndị chọrọ iji okike kee ọrụ; na ndi choro irite uru site na ihe omuma a." Kedu ihe bụ Creative Commons na gịnị ka ọ na-eme?
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ihe ntanetị na-adọrọ mmasị ma baa uru n'ịntanetị «Licenser Chooser» o Onye Nhọrọ Ikike, nke bụ nke weebụsaịtị nke Ihe eji eme ihe (CC) na ebumnuche ya bụ ịkwado ma melite nhọrọ kwesịrị ekwesị nke CC ikike maka okike nke ndi nwere mmasi; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Họrọ ikike: Nweta ntanetị maka ịhọrọ ikike ikikere CC ziri ezi